Home / ngwa / Ọkụ na-egbuke egbuke / ntinye ọkụ ọkụ ọkụ nke aluminom maka ịgba agba
Category: Ọkụ na-egbuke egbuke Tags: aluminom ụkwụ, aluminum wheel kpo oku, aluminum wheel preheater, automotive wiil preheating, induction preheater, nkwalite ịmalite ịmalite, induction aluminum nke na-ekpo ọkụ, itinye n'ọkwa preheating akpakanamde wheel, induction wheel preheating, ugboro ugboro, usoro ikpo oku, na-ekpo ọkụ, preheating aluminum wheel, preheating akpakanamde aluminum wiil
ebumnobi: Ihe ịgba a na-agba agba na-achọ ka ihe na-ekpo ọkụ. Tụkwasị na nke a, enwere ihe achọrọ na ihe ahụ agaghị ajụkwa n'okpuru otu ọnọdụ okpomọkụ echere tupu ịgba.
ihe onwunwe : Akụkụ ndị ahịa na-enye
okpomọkụ : 275 ºF (135 ºC)
DW-MF-70kW induction usoro oku, nke nwere mpempe akwụkwọ dịpụrụ adịpụ nwere ihe atọ 27 μF capacitors maka ngụkọta nke 81 μF
- Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ nke e mere ma mepụtara kpọmkwem maka ngwa a.
A na-eji ọtụtụ eriri na-eme mkpokọ helical / pancake. A na-etinye wiilị 22 ”aluminom n’ime eriri igwe wee kpoo ọkụ maka 30 sekọnd na okpomọkụ nke 275 ºF. Mgbe a kwụsịrị kpo oku, akụkụ ahụ na-anọgide na ma ọ bụ karịa 150 ºF maka 108 sekọnd, na-emezu ihe ọkụkụ a chọrọ.
Nsonaazụ / Uru Ugbo oku nyere:
-Uniform okpomọkụ nkesa na wiil
-Precise akara nke kpo oku na ụkpụrụ
-Irụ ọrụ; belata ụgwọ ọrụ ike
Egwuregwu ike ikuku na-efu oge